परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ५२३ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरद्वारा सजाय प्राप्त गर्दा, पत्रुसले यसो भन्दै प्रार्थना गरे, “हे परमेश्‍वर! मेरो देह अनाज्ञाकारी छ, र तपाईंले मलाई सजाय दिनुहुन्छ र न्याय गर्नुहुन्छ। म तपाईंको सजाय र न्यायमा आनन्द मनाउँछु, र तपाईंले मलाई नचाहनुभए तापनि, तपाईंको न्यायमा म तपाईंको पवित्र र धर्मी स्वभावलाई देख्छु। अरूहरूले तपाईंको न्यायमा तपाईंको धर्मी स्वभावलाई देख्न सकून् भनेर, जब तपाईंले मलाई न्याय गर्नुहुन्छ, तब म सन्तुष्टिको आभास गर्छु। यदि यसले तपाईंको स्वभावलाई व्यक्त गर्न सक्छ र तपाईंको धर्मी स्वभावलाई सबै प्राणीहरूद्वारा देख्न सक्‍ने तुल्याउँछ भने, र यदि यसले तपाईंप्रतिको मेरो प्रेमलाई अझै शुद्ध तुल्याउन सक्छ, कि जो धर्मी हुनुहुन्छ म उहाँजस्तै बन्‍न सक्‍छु भने, तपाईंको न्याय असल छ, किनभने तपाईंको अनुग्रही इच्‍छा त्यस्तै छ। मभित्र अझै धेरै विद्रोही कुराहरू छन्, र तपाईंको सामु आउनको लागि म अझै पनि योग्यको छैन भन्‍ने कुरा मलाई थाहा छ। तपाईंले मलाई अझै बढी न्याय गर्नुभएको होस् भन्‍ने मेरो कामना छ, चाहे त्यो विषम परिस्थितिद्वारा होस् या महासंकष्टहरूद्वारा होस्; तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो लागि बहुमूल्य छ। तपाईंको प्रेम अति नै प्रगाढ छ, र म अलिकति पनि गुनासो नगरिकन आफूलाई तपाईंको कृपामा समर्पित गर्न इच्‍छुक छु।” यो परमेश्‍वरको कार्यलाई अनुभव गरिसकेपछिको पत्रुसको बोध हो, र यो परमेश्‍वरप्रतिको तिनको प्रेमको गवाही पनि हो। आज, तिमीहरूलाई पहिले नै विजय गरिएको छ—तर तिमीहरूमा कसरी यो विजय व्यक्त गरिएको छ? कतिपय मानिसहरू भन्छन्, “मेरो विजय भनेको परमेश्‍वरको सर्वोच्‍च अनुग्रह र उच्चता हो। अहिले मात्रै म मानिसको जीवन खोक्रो र महत्त्वहीन छ भन्‍ने कुरालाई महसुस गर्छु। मानिसले एकपछि अर्को पुस्ताको सन्तान पैदा गर्दै र हुर्काउँदै दौडधूपमा आफ्‍नो जीवन बिताउँछ, र अन्त्यमा केही पनि बाँकी रहँदैन। आज, परमेश्‍वरद्वारा विजय गरिएपछि मात्रै यसरी जिउनुको कुनै मूल्य छैन भन्‍ने कुरालाई मैले देखेको छु; यो साँच्‍चै नै एउटा अर्थहीन जीवन हो। म पनि मर्न सक्छु र यससँग कुरै सकिन सक्छ!” विजय गरिएका त्यस्ता मानिसहरू के परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिन सक्छन्‌? के तिनीहरू आदर्शहरू र नमुनाहरू बन्‍न सक्छन्? त्यस्ता मानिसहरू निष्क्रियताको एउटा पाठ हुन्; तिनीहरूसँग कुनै आकांक्षा छैन, र तिनीहरूले आफूलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्दैनन्। तिनीहरू विजय गरिएकाहरूको रूपमा गन्ती हुन्छन्‌ तापनि, त्यस्ता निष्क्रिय मानिसहरू सिद्ध पारिनको लागि असक्षम हुन्छन्। उनलाई सिद्ध बनाइएपछि, आफ्‍नो जीवनको अन्त्यतिर, पत्रुसले भने, “हे परमेश्‍वर! यदि मैले थप केही वर्ष जिउनु पर्थ्यो भने, म तपाईंको अझ शुद्ध र अझ गहन प्रेमलाई प्राप्त गर्ने कामना गर्नेथिएँ।” उनी क्रूसमा टाँगिन लागेको बेला, उनले आफ्‍नो हृदयमा यसो भन्दै प्रार्थना गरे, “हे परमेश्‍वर! तपाईंको समय अब आइपुगेको छ; तपाईंले मेरो लागि तयार पार्नुभएको समय आइपुगेको छ। म तपाईंको लागि क्रूसमा टाँगिनैपर्छ, मैले तपाईंलाई यो गवाही दिनैपर्छ, र मेरो प्रेमले तपाईंका मागहरूलाई पूरा गर्न सक्छ, र यो अझै शुद्ध हुन सक्छ भन्‍ने म आशा गर्छु। आज, तपाईंको लागि मर्न सक्नु, र तपाईंको लागि क्रूसमा टाँगिन सक्नु, मेरो लागि सान्त्वना दिने र आश्‍वासन दिने किसिमको छ, किनभने तपाईंको लागि क्रूसमा मर्न सक्नु र तपाईंका इच्‍छाहरूलाई पूरा गर्नु, र आफैलाई तपाईंमा दिन सक्नु, तपाईंलाई आफ्‍नो जीवन चढाउनु जत्तिको आनन्दको कुरा मेरो लागि अरू केही छैन। हे परमेश्‍वर! तपाईं कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ! यदि तपाईंले मलाई जिउन दिनुभएको भए, तपाईंलाई म अझै बढी प्रेम गर्न इच्‍छुक हुनेथिएँ। जबसम्‍म म जीवित रहन्छु, तबसम्‍म म तपाईंलाई नै प्रेम गर्नेछु। म तपाईंलाई अझै गहन रूपमा प्रेम गर्न चाहन्छु। तपाईंले मलाई न्याय गर्नुहुन्छ, र मलाई सजाय दिनुहुन्छ, र मलाई जाँच्‍नुहुन्छ किनभने म धर्मी छैन, किनभने मैले पाप गरेको छु। अनि तपाईंको धर्मी स्वभाव मेरो लागि अझै स्पष्ट हुन्छ। यो मेरो लागि एउटा आशिष्‌ हो, किनभने म तपाईंलाई अझै गहन रूपमा प्रेम गर्न सक्छु, र तपाईंले मलाई प्रेम गर्नुभएन भने पनि म तपाईंलाई यसरी नै प्रेम गर्न इच्‍छुक छु। तपाईंको धर्मी स्वभावलाई हेर्न म इच्‍छुक छु, किनभने यसले मलाई अर्थपूर्ण जीवन जिउनको लागि अझै सक्षम तुल्याउँछ। मेरो जीवन अहिले अझै अर्थपूर्ण भएको छ भन्‍ने मलाई आभास हुन्छ, किनभने म तपाईंको लागि क्रूसमा टाँगिएको छु, र तपाईंको लागि मर्नु अर्थपूर्ण छ। तैपनि, मलाई अझै पनि सन्तुष्टिको आभास छैन, किनभने मलाई तपाईंको बारेमा अत्यन्तै थोरै मात्रै थाहा छ, तपाईंका इच्‍छाहरूलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न म सक्दिनँ भन्‍ने मलाई थाहा छ, र तपाईंलाई थोरै मात्रै फिर्ता दिएको छु। मेरो जीवनमा, तपाईंलाई मैले मेरो सम्पूर्णता फिर्ता दिन असक्षम रहेको छु; म त्योबाट धेरै टाढा छु। यस क्षणमा फर्केर हेर्दा, म तपाईंप्रति अत्यन्तै ऋणी भएको आभास गर्छु, र मेरा सबै गल्तीहरूको निम्ति र मैले तपाईंलाई फिर्ता नदिएको सबै प्रेम चुकाउन मसँग यो बाहेक अरू क्षण छैन।”